उच्छ्वास कविता र सिद्धिचरण श्रेष्ठ
सोमवार, १५ मंसिर २०७७
मान्छेको जीवन दुई दिनको घाम–छायाँ जस्तो, आज छ, भोलि शुन्य भएर हामी माटोमा मिसिनु पर्छ । एउटा चुहेको गाग्री जस्तो थोपा थोपा पानी चुहेर एकदिन गाग्री रित्तो हुनुपर्ने
रहेछ । त्यसैले माया छ भने यो संसारलाई प्रेम गर्न सिक । दीन दुःखीहरूलाई पोलेको आत्मामा अलिकता पानी राखी निभाउँन खोज् । केवल वैभवको ज्वालामा अहंकार बनी पिल्सिएको आत्मालाई कुल्चिने नगर्नु ।
हो, भौतिक सुख र सुविधा आजको लागि मात्र हो । भोलिका लागि होइन् । भोलि त तिमी एक्लै हुनेछ । एक्लो जीवनमा न धन सम्पत्तिको आवश्यकता छ न सुख र सयलले बाँच्न सकिन्छ । केवल आँखा भएर पनि न हेर्न सकिन्छ न मुख भएर पनि न बोल्न सकिन्छ । हामीलाई आजको महत्व छ । आज हामीले धेरै काम गर्नुछ । भोलिको लागि बाटो बनाउँनु छ । हाँसी खुशी मान्छे मान्छेभित्र सबैले आ–आफ्नो सहयोग गर्नुछ । त्यसैले केवल आँगनमा बाँधी राखेका हात्ती होइन् हामी । कसैको दया र मायामा पलाउने होइन् हामी । हामी त मान्छे हौँ । मान्छेभित्र दानव होइन् मानवको बास हुनु पर्दछ ।
मधुशाखामा हामी हर्दम घुमेर हामी हामीमा हाम्रो जस्तो कहाँ हुन सकिन्छ र ? आमा तपाईको त्यो गहिरो सुस्केरा मेरो लागि आज अर्ती बनेको छ ।
आमा – वैभव वैभव जल्दछ ज्वाला
बाबु बहाऊ वैभव खोला,
बाँधी आँगनमा हात्ती—
हर्दम घुम तिमी मधुशाला ।
जग विनाको घर जस्तै भोलि विनाको आज जस्तैं बालुवै बालुवाको घरमा जे जसरी सिँगारिए पनि आखीर क्षण भरको लागि मात्र न हो । शून्य शून्यमा कोही नभएको बेला एक छिन बालुवामा पानी हाले पनि न परिणाम् आउँन्छ न पूmलै फुल्न सक्छ ? त्यसैले सपनाको यो घरभित्र विपनासम्म आई पुग्दा भताभुङ्ग भएर घर ढल्कि सकेको हु्न्छ ।
हामीलाई थाहा छ, झरनाले झर्भmर गीत गाउँदै युगैं युगदेखि मानव जीवनको लागि अमृत पिलाईरहेको छ । प्रतिपल उठेर होला यो धर्तीको छातीमा हलचल पैदा भएको छ । छोरोले आमालाई प्रश्न गरी सोढ्छन् । आमा म माया गर्छु धेरै तपाईलाई । तर आज के भैरहेको छ । खेलौनाको खेल सम्झेर जीवन हिँड्दा हिँड्दै पैतलाको डोब छाडेरै स्वर्गको बाटो जानु छ । आमा म बालुवाको घर सिँगार्न सक्दिन । वैभवको बाटोमा म कहिले पनि हिँड्न जान्दैन । मलाई झरना भैmं झर्न देऊ । मलाई क्षणभरको हाँसो हाँस्न नदेऊ ।
छोरो – के सिंगारुँ बालुवाको घर
क्षणभर हाँसी शून्य विजनमा
झर्ना झै झर्ने झर्झर
उठ्दछ प्रतिपल हलचल उरमा ?
आमा मेरो इच्छा छ । म जीवनमा कवि बनेर मेरो अभिभार पुरा गर्न चाहन्छु । आमा तपाई नरिसाउँनु होला । मेरो इच्छा भित्र म बाँच्न चाहँन्छु । मेरो मनले खोजेको अनि हृदयको कम्पनले भनेको मेरो आफ्नै बाटो म हिँड्न चाहन्छु । आमा मलाई थाहा छैन, तपाईलाई म के उपहार दिन सक्छु र ? यो जीवन तपाईकैं हो । यो रगत र मासु तपाईको नासो हो । त्यसैले आमा यो जुनीमा तपाईको गुण कहाँ तिर्न सक्छु र ? जुनी जुनीसम्म आमाको माया शिरमा राखी म कवि बनेर समाजको ऐना बन्न चाहन्छु ।
आमा, आमा यो जीवनको
कवि बन्ने मेरो अभिभार,
हृदय कम्पनले लैजान्छ उतै
टक्राउँ म के उपहार ?
कतै बिग्रेको छ भने हामीले बनाउँनुपर्छ । कतै भत्केको छ भने हामीले समाल्नु पर्छ । मलाई चिन्ता छ । यो संसारमा कतै भत्केको छ र कतै बिग्रेको छ भने जग बलियो पारी हामीले बनाउँनु पर्छ । आमा यहाँ कदम कदममा त्रुटी छ । त्रुटि सुधार नगरी हामी बाँच्नुको के अर्थ हुन्छ र ?
बाँच्नु केवल जीवनको लागि मात्र होइन । बाँच्नु केवल जन्म र मृत्यु लागि मात्र होइन । यसैले आमा म बाँच्नु छ । उरमा चिन्ता उठेर ज्बारभाट हटाउँनु छ । व्यवहारलाई सजिलो बनार्ई भविष्यको बाटो कोर्नु छ । समस्यै समस्याको यो जीन्दगानीमा समस्यको मूल जरो पत्ता लगाउनुु छ । यसैले मानव जीवन नदी जस्तैै बगेर सरल बग्नु छ । बिग्रे भत्केका सम्पूर्ण संसारलाई हामी महामञ्जुश्री बनेर बनाउनु छ ।
बिग्रेको अबको संसार
उरमा चिन्ता उठ्दछ ज्वार
कदमकदममा त्रुटि छन् आमा
बोझ गह्रुँ जग–व्यवहार ।
जिन्दगीको बाटो बनाउनु धेरै गा¥हो छ । पहाड फोर्नु पर्छ कतै नदी र नालामा पुल हाल्नुपर्छ । मान्छे बाँच्नको लागि मान्छेको इच्छानुसार काम गर्नुपर्छ । त्यसैले गा¥हो छ । मेरो जीवनको कवितामा थुप्रै भंmझट र विवशताको कथा छ । हिँड्दा हिँड्दै हिँड्न नसक्ने बाटो छ । हेर्दा हेदै हेर्नै नसक्ने विवसताको कथा छ । त्यसैले भविष्यलाई आँखाले केलाउन बाटोलाई सुगम पार्नु छ । लालाबाला भविष्यका कर्णधारहरुलाई स्वच्छ र सुन्दर अनि काँढा बिनाको बाटोेमा हिँड्उनु छ । त्यसैले आमा म चिन्तै चिन्तामा जलिरहेछु । मेरो जीबन कविता बनेर अरुलाई पढाईरहन् ।
जुन पथ छ सुगम शिशुतकलाई
कठिन त्यही हाय मलाई
आमा मेरो जीवन कविता
झंझटको हूँ म विवशता ।
बोभैm बोझको यो जिन्दगीमा जति जान्दछन् उति नै धेरै कठिन छ । भारै–भार छ । उचाल्नैं नसक्ने थेग्दै नसक्ने कति भार यो । त्यसैले म भन्छु आमा फेरि म पढेर मात्र के गरुँ ? कविता हुँ म कविवर बनी अभिलाषा छ मेरो चिर–संचित । आजकाल किन हो आमा मेरो आत्माले कविता कोर्छ ।
जे जान्दछु त्यो पनि बोझ कठैं
फेरि म के पढूँ आमा
कविता मेरो म बनूँ कविवर
यही चिरसंचित अभिलाषा ।
सत्यलाई खोलको आवश्यकता पर्दैन । सत्य नाङ्गो छ । आँखाले हेर्न गा¥हो छ । न आगोले पोल्छ न पानीले झिज्छ, यो त सृष्टि रहुँन्जेलसम्म चलिरहन्छ । त्यसैले यो जगको चालमा कसैले छोप्नु आवश्यक छैन । जे बोल्दछन् यो छातीभित्र थुप्रैँ बेदनाका पीडाहरू नपोखुन् भन्दैमा कहाँ रोक्न सकिन्छ र ? त्यसैले होला यो वैभवको पथमा रोक्छु भनेर रोक्न नसके भैmँ छिया छिया भएको मुटुभित्र ज्वारभाट चलेर आगोको मुस्लो निस्केको बेला कवि कविता नलेखी कहाँ बस्न सकिन्छ र ? मनको व्यथा कतै नपोखी मनैं मन भित्र कहाँ मार्न सकिन्छ र ?
खोल नलाई जगको चाला
बोल्छु म जो उरको भाषा
रोक्छ भन्दैमा वैभवको पथ
के म नलेखूँ अब कविता ?
आमा मलाई मेरो बाटोमा स्वतन्त्रपूर्वक हिँड्न देऊ । कसैको नियतीमा म आस्थाको बन्दी बन्न चाहन्न् । म त कवि हुँ आमा यो जगतको प्रतिद्वन्दी भई देश, काल र परिस्थितिलाई हेरी अन्याय र अत्याचारको बिरुद्ध विगुल फुक्नुपर्छ । न्यायको लागि आगो खान सक्नुपर्छ । विरोधको लागि विरोध मात्र होइन् एउटा मान्छे भएर कसैको दासत्व स्वीकार गर्न सकिँदैन ।
आमा, मेरो मेरै बाटो
होइन भ नियतिको बन्दी
भन्न हुन्न रे भन्छ घमण्डी
म कवि जगतको प्रतिद्वन्दी ।
भनिन्छ जन जनमा छीः छीः दुर् दुर् छ । सबैको मुखमा धिकारको जन्म भो । कदम कदममा काँढा जस्तै जताततै हाहाकार छ । मेरो गतिको प्रिय सिँगार हामी हामीमा खण्ड खण्ड छ । सत्य के हो त्यो लुक्दैन । एक दिन सबैको सामु ल्याउनु छ । सोच मात्र हाम्रो फरक न हो कसैको अलि ढिलो भो ।
दिन गयो रात गयो । समयानुसार चल्न नसक्ने मान्छे पुरानो भो । पुरानोमा खिया लाग्नु स्वभाविक छ । मान्छे नयाँ खोज्छ पुरानो होइन् । त्यसैले समयलाई चिन्नु छ । समयमा हामी हिँड्नु छ । कसैको कुभलो नचिताई जगत कल्याण होस् भनी हामी सबैले सोच्नु छ ।
पद पदको हाहाकारमा दुर् दुर्को धिकारमा पनि होइन् । कसैले घिसारेर व्रतको हाराहार भित्र अन्याय हामीले खोज्नु हुन्दैन । लामो सुस्केरा संगै आफ्नै कथाहरू पढेर हामी हामीभित्र उच्छावासका व्यथाहरू बुझ्नु पर्दछ । त्यसैले मलाई लाग्छ म भित्र तिमी अट्नु पर्छ । हामी हामीमा हामी भएर बाँच्न सक्नु पर्दछ ।
प्रियजनहरूका छीः छीः दुर् दुर्
दुनियाको बस धिक्कार
कदम कदमको हाहाकार
मेरो गतिको प्रिय सिंगार ।
यही दुर् दुर् यही धिक्कार
पद पदको यो हाहाकार
लैजाने छन् मकन घिसारी
मेरो व्रतको हाराहार ।
हामी सबैले आ–आफ्नो खेल खेल्नै पर्छ । सच्चा चित्रको पक्षपाती भएर हृदय – हृदय भित्र प्रेमको धारा बगाउँनु पर्छ । म एउटा यसको पात्र बनेर क–कस्ले के के गर्दोरहेछ भनी सोधिरहँुला । प्रेमको यो सागरभित्र माया प्रितीका कथा श्रृष्टिका रूपमा भनिरहौँला । हृदय – हृदय भित्र अन्तर आत्माको कथा जोडिरहौला । चन्द्र र सूर्य अनि यो धर्ती र आकाश जस्तै नङ्ग र मासुको सम्बन्ध हामी सबैले बुझ्नु पर्दछ । त्यसैले माया – माया हो । माया भित्र सच्चाको दीयो बलेको हुन्छ । अध्यारोलाई विनाश गरी उज्यालोलाई हामीले न्याय पाएको भन्नै पर्दछ ।
अनि खेलूँला आफ्नै खेल
लिउँला आफ्नै सच्चा चित्र
हृदय हृदयको प्रेम बहाई
म बनूँला त्यसको पात्र !
लाग्छ उच्छ्वास युग कविको मनको व्यथा हो । कविले कविता कोर्न नपाउँला भनी आमासँग गरेको पुकार हो । लामो सुस्केरामा जीवन के हो बुझ्ने एउटा मार्ग हो । झरना झै झर्ने सुन्दर निष्कलक स्वच्छ पानी हो । अस्तु ।
प्रकासित मिति २०७७–५–६
चम्क चम्क कवितामा युगकवि
सिद्धिचरणका कविता – फुटेको भाग्य
काठमाण्डौ १५ मंसिर २०७७ । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले आफ्ना...
सिरहा१५,मंसिर २०७७ सिरहा र सप्तरीमा यस वर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि...
‘जनताले महसुस गर्नेगरी विकासका कामहरु अघि बढाएका छौ’–धुलिखेल नगरपालिकाको उपमेयरसँग अन्तर्वार्ता
बिमला कुमारी चौलागाँई शर्मा उपमेयर, धुलिखेल नगरपालिका १) तपाई उपमेयरको...